A Story in MTU (2) | Layma's World
ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာ (၇) ။ ။ ဗိသုကာ ကျောင်းသူဘ၀…အဲသလိုစခဲ့တယ်…
“လေးမ” တို့ တုန်းက ပထမနှစ်ဖြေပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဗိသုကာလိုင်းလိုချင်တဲ့ သူတွေကို လျှောက်လွှာတင်ခိုင်းတယ်……။ တခြားမေဂျာတွေကတော့ ဒုတိယနှစ်ဖြေပြီးမှ လိုင်းခွဲတာ……(အခုတော့ ပထမနှစ် စတက်ကတည်းက မေဂျာခွဲ လိုက်ပြီ )…..။ ဗိသုကာဘာသာရပ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုတဲ့အတွက် အမှတ်နဲ့ မခွဲဘဲ ၀ါသနာပါတဲ့သူ လျှောက်ခိုင်းတယ်……။ တစ်နှစ်
နဲ့ တစ်နှစ်တော့ “မူ”ကမတူပါဘူး……။ အာခီမေဂျာကို အညံ့ဆုံးလူတွေပို့ ခဲ့ဖူးသလို အတော်ဆုံးလူတွေလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ဖူးတယ်…….။
လူတွေ့ စစ်ဆေးပြီး အောင်မှရမယ်ဆိုလို့ဆရာကြီး ဒေါက်တာလွင်အောင် ရေးတဲ့ “ဗိသုကာ ပညာနိဒါန်း” ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့ရတယ်…..( တစ်လုံးမှကို သဘောမပေါက်ဘူး )……။ အဆောင်မှူးမမက အာခီတက် ဆိုတော့ ဘာတွေလေ့လာထားရမလဲ မေးရတယ်…….Space ဆိုတာဘာလဲ……Form ဆိုတာဘာလဲ…..ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့တော်တော် ခေါင်းခြောက်ခဲ့ရတယ်……။ ပြီးတော့ ကဒ်ပြားပေါ်မှာ ပုံဆွဲ…၊ ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်ပေးလိုက်ပြီး အဲဒါကို ပုံဘယ်နှစ်မျိုးပြောင်းလို့ ရလဲ ပြောင်းကြည့်ထားတဲ့……။ တော်ပါသေးရဲ့…..လူတွေ့မစစ်ဖြစ်လို့ ……..။ စစ်ရင် ကျမှာဘဲ…….။ ဒုတိယနှစ်မှာ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းမထုတ်ရသေးဘူး……..။ ပုံဆွဲနည်းနဲ့ဒီဇိုင်း အခြေခံတွေဘဲ သင်ရတော့ တော်တော် စိတ်ဓါတ်ကျတယ်……။ ဒီလိုမှန်းသိရင် ပန်းချီသင်တန်း အရင်တက်ခဲ့ပါတယ်လို့နောင်တရမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်……..။ သင်ရသမျှက ပန်းချီပညာနဲ့ မှမကင်းတာ……..။ စသင်တဲ့နေ့ က ABCD နဲ့ 1234 ရေးရတာ……ည ၂ နာရီထိုးတယ်…..။ T-square ကိုပြောင်းပြန်ကိုင်ပြီး ဘောင်ခတ်လို့ယောက်ျားလေးဆောင်မှာ အတင်းအုပ်ခံရသေးတယ်…….။ နောက်တနေ့သင်္ချာတန်းသွားတော့
၀ိုင်းလှောင်ကြတယ်…….။ ( ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေထက်တောင် အတင်းပြောတတ်သေးတယ် ) ….။ ဗိသုကာဘာသာကို စသင်ရတာ ပျော်စရာကောင်းသလို လို နဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်……..။ ဆရာကလည်းမရှိဘူး…..အဆောင်မှူးက မဟာဘွဲ့ အတွက် ရန်ကုန်မှာ Thesis သွားလုပ်တော့ “လေးမ” တို့ မှာ အမိမဲ့သား ရေနဲငါးလေးတွေလို…..အားကိုးရာမဲ့ခဲ့ရတယ်…….ရန်ကုန်ကဆရာတွေက အလှည့်ကျ လာသင်ကြတယ်……။ ရန်ကုန်ကဆရာ မလာတဲ့ အပတ်ဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့မန်းလေးမြို့ ကိုပတ်ပြီသာမှတ်……။ ဆရာ မလာရင် ပျော်ခဲ့သမျှ အခုတော့ ငိုချင်စရာကြီး…….သင်ရိုးကုန်မသင်ခဲ့ရဘူး……မသိခဲ့ မတတ်ခဲ့….မသင်ခဲ့ ရတာတွေက အများကြီးဘဲ……။ ဆရာတွေကပြောတယ်…….ဗိသုကာဘာသာက စာများများဖတ်ဖို့ လိုတယ်တဲ့……ဖတ်ချင်လို့library မှာရှာတယ်……ရှိပါတယ်လေ….နဲနဲပါးပါးပေါ့…..“ Love story in Harvard ” ကိုကြည့်ရတဲ့အခါ “လေးမ” ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀နဲ့နှိုင်းယှဉ်မိတော့……ဘယ်လိုရေးရမလဲ…..အဲလိုခံစားရတယ်….။ ကောင်းတာပေါ့…… ပြည့်စုံနေရင် ကြိုးစားနေရဦးမယ်…… အခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အပျင်းကြီးပြီး စာမလုပ်တာကို ဟိုဟာလွဲချ…ဒီဟာလွဲချနဲ့အကြောင်းပြလို့ ရတာပေါ့………။ သင်ပေးတဲ့ ဆရာတွေကတော့ ကြိုးစားပမ်းစား စေတနာထားပြီးသင်ပေးကြတယ်……။ ရန်ကုန်ကလာရင် စာအုပ်တွေယူလာပေးတယ်…….။ ဆရာတွေ မပြန်ခင် မိတ္တူဆွဲထားရတယ်…..“မိ” နဲ့နှစ်ဦးပိုင်စာအုပ်တွေက များလာတယ်……။ ဒီလိုနဲ့ဆရာတွေကို ဘူတာမှာ သွားကြိုလိုက်…..ပြန်ပို့ လိုက်…..နဲ့ဒုတိယနှစ် (ဗိသုကာ ပထမနှစ်) ကို ဂုဏ်ထူးနဲ့(ကြုံတုန်းကြွားရတာ) အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်……။
ဒီ -Post ကိုရေးတော့ ဆရာ့ကို သတိရတယ်……ဆရာ….ဆရာ…..တိုက်ပုံအင်္ကျီလေး ပုခုံးပေါ်တင်လို့ ……ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ဆရာ့ကို သိပ်ကြောက်ခဲ့ရတယ်……ဆရာစလို့ငိုခဲ့ရတယ်…..ဆရာထုလို့ နဖူးဖုခဲ့ရတယ်……ဆရာဆွဲခိုင်းတဲ့ ကနုတ်ပန်းတွေကြောင့် ၂ ရက်လောက် တရေးမှ မမှေးခဲ့ရဘူး…..။ ဆရာ….ဆရာ……ပေကြိုး တခွေပေးပြီး ဒီအဆောက်အဦကို တိုင်းပြီးဆွဲထားလိုက်……အဲဒါ Measure drawing ဘဲ ဆိုပြီး ပေကြိုး တခွေနဲ့ထားပစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာ……အခုလည်း အဆင်ပြေသလို နေရစ်ခဲ့ကြတော့ဆိုပြီး “လေးမ” တို့ ကို ထားခဲ့ပြန်ပြီ……။ ဆရာကတော့ “စ” မှာ…..ဘ၀သစ်မှာ …… ပျော်နေပြီလားဆရာ….ပျော်ပါဆရာရယ်…..ဆရာပျော်ရင် တပည့် ၀မ်းမြောက်ပါတယ်…….။ ဆရာ့တပည့် တော်တော်များများလည်း ဆရာနဲ့ အတူ ရှိနေကြပြီနော်……။ နောက်ထပ်လည်း လာကြလိမ့်ဦးမယ်ဆရာ……..။ ဆရာ့တပည့် “လေး” ကတော့ တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်း အားလုံးကို လွမ်းနေပါ့မယ်…….ဆရာ……။ ။
ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာ (၈) ။ ။ ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ပ )
မနက် ၃ နာရီ လောက် သန့် စင်ခန်းတွေဘက်ကို ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက် လျှောက်လာရင်း ယိုင်တ်ိယိုင်တိုင် လျှောက်လာတဲ့ အရိပ် တစ်ခုနဲ့ဖြတ်ခနဲ ဆုံတယ်…..။ မော့ကြည့်ပြီး လျော့တိလျော့ရဲ ပြုံးပြလိုက်တယ်…..ထမင်း ၂ ရက်မစားရတဲ့ အသံနဲ့“ ပုံတွေ ပြီးပြီလား….” တဖက်က အရိပ်က ခေါင်းခါပြီး “ ပြီးသေးပါဘူးဟာ…..”
“ ငါတော့ interior တစ်ပုံပဲ ဆွဲတော့မယ်….အားလုံးပေါင်းမှ ၈ ရွက်ပဲ ပြီးတယ်….. section လဲမပြီးသေးဘူး… .တတ်နိုင်ဘူး…ဒီလောက်ပဲ ရမယ်ဟေ့….”
“ နင်တို့ ဖို့စားဖိုဆောင်ကဟင်းထုတ်လာတယ်….နင်တို့ထမင်းစားကတ်တွေ ငါတို့ ပဲ ယူထားပေးမယ်….ထမင်းကတော့ ၀ယ်စားမှာ မဟုတ်လား….စားပြီးရင် ပန်းကန်တွေ ထားထားလိုက်…..ငါတို့လာယူ့ပြီး ဆေးပေးမယ်…..”ခက်ဆစ်
ထမင်း ၅၀ ဖိုး= လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့် က ၅၀ ကျပ်တန်မြန်မာငွေစက္ကူဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်၍ ၉၅ပေါင်သာရှိသော လူနှစ်ဦး ၀လင်စွာစားသုံးနိုင်သော ထမင်း…..။
“ ငါ ၁၅ မိနစ်ပဲ အိပ်မယ်……၁၅ မိနစ်ပြည့်ရင် ငါ့ကိုနှိုးနော်…..မနှိုးရင် သေခန်းပြတ်ပဲနော်….ငါ ဘာမှမပြီးသေးဘူး…..သေချာနှိုးနော် “မိ” …..”
ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာ (၈) ။ ။ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ဒု )
Scene (4 )_
ဒီတခါ ဒီဇိုင်းက Library……။ ပုံစံငယ်ပါတင်ရမည်….။ အခန်းထဲက အ၀တ်သေတ္တာ ၊ စာကြည့်စားပွဲ ၊ ခုတင် ပေါ်မှာ ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ရန် ပလတ်စတစ်ပြားများ ၊ ပြတင်းပေါက် နေရာတွင်ကပ်ရန် စတစ်ကာ အညို အနက် ၊ လွှ ၊ ဓါး ၊ သံပေတံ ၊ ဇာဂနာ ၊ spray ဗူး ၊ ကော်ရည် ၊ ATM ကော် ၊ ကော်ရည်သုတ်ရန် စုတ်တံ ၊ Drawing များ စတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများက အပြည့်အ၀ နေရာ ယူထားပါသည်……။
“ မိ…နင်ဟာလေ….model ချိုးရပါမယ်ဆိုမှ ဒီဇိုင်းကို အ၀ိုင်းကြီးထုတ်တယ်…. တော်တော် မြွေဖမ်းချင်တယ်…..”
“ငါက နင့်လို လေးထောင့်မှ မကြိုက်တာ…..ငါက နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ လိုင်းကွေးတွေပဲ ကြိုက်တယ်…. နင်သာ ကျောင်းပြီးတော့မယ် square ကနေကို မထွက်တော့ဘူး……”
“ဟဲ့…..ငါက simple ကြိုက်တာ….လက်တွေ့ ဆန်တာ….မာရေကျောရေ ဒီဇိုင်း sense ရှိတာမဟုတ်ဘူး…..နားလည်လား…..”
ဒီလိုနဲ့မိရဲ့ library အ၀ိုင်းကြီးကို ငြင်းရင်းခုံရင်း နှစ်ယောက်သား model ချိုးကြတယ်……။ အကွေးကြီးရအောင် ပလတ်စတစ်ပြားကို မူရင်းစကေးထက် ဘယ်လောက်ပိုဖြတ်ရမလဲတွက်……၊ စောင်နဲ့ပတ်…..အပေါ်ကမီးပူနဲ့ ဖိပြီး အပူပေး…..ပျော့သွားတဲ့ အချိန်မှာ ထိုင်ခုံ အ၀ိုင်းလေးမှာ ပြေးကပ်ပြီး ပုံသွင်းရတယ်….။ တကြိမ်မရ နောက်တကြိမ်ထပ်ကြိုးစားရင်း ….. နောက်ဆုံးတော့ မိ ရဲ့ library အ၀ိုင်းကြီး အောင်မြင်စွာ ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…..။ “လေးမ” ရဲ့ ပထမနှစ်ကတည်းက အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မုံရွာချည်စောင်လေးလဲ မီးကျွမ်းသွားပါတယ်….နောက်တော့ ခွေးသားအမိ လက်ထဲထည့်လိုက်ရပါတယ်……။
“ ဟေ့….လေးမ တို့ပုံတွေ ပြီးပြီလား….”
“ ဘယ်ပြီးဦးမလဲ ဟာ ”
“ ငါတို့ လဲ မပြီးဘူး….ဆရာမကို ဂျူရီ ရက်ရွှေ့ ခိုင်းကြရအောင်….”
“ အာခီတွေ….အခန်းနံပါတ် (…..) ကိုလာခဲ့ကြပါ…..အရေးပေါ် meeting ”
အဆောင်ရဲ့ ဟိုဘက်ထောင့်…..ဒီဘက်ထောင့်မှ ဟိုဘက် wing ဒီဘက် wing မှာနေသူများသို့ …..အပေါ်ထပ်ဝရန်တာမှ အောက်ထပ်ဝရန်တာသို့အသံပေးလိုက်တော့ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာ လူစုပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်…..။
( တခါကလဲ အုပ်စုလိုက် အတန်းလစ်လို့ပါချုပ်ဆီမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး အဆောင်ရှေ့မှ ပါချုပ်အိမ်အထိ ပြေးခိုင်းခြင်းဖြင့် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်…..ပါချုပ်ကြီး ပြောတာကတော့ တစ်ယောက်ထဲ အတန်းလစ်တာ အပြစ်မရှိဘူး…..အုပ်စုဖွဲ့ တာက အပြစ်ကြီးတယ်တဲ့…..ဒါပေမယ့် လေးမ တို့ က အမှတ်မရှိဘူး….အမြဲတမ်းအုပ်စုလိုက် တိုင်ပင်ပြီးလုပ်တယ်……စည်းလုံးညီညွတ်တာမဟုတ်ဘူး….. သူခိုး သေဖော် ညှိတာ )
၅ မိနစ်လောက် တိုင်ပင်ပြီးတာနဲ့ဆရာမ အိမ်ကို တအုပ်စုလုံး ချီတက်ကြပါတယ်……။
သေခါနီးမျက်နှာလေးတွေနဲ့ဆရာမကို ဘယ်လိုပဲ သနားအောင် ပြောပြော အသည်းမာလှတဲ့ ဆရာမက လုံးဝရက်မရွှေ့ ပေးတဲ့အပြင် ပြောရမယ့် နံပါတ်စဉ်ကိုတောင် မဲနှိုက်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်……။ ပြန်ရောက်တော့ အစည်းအဝေးပြန်ထိုင်ကြတယ်…..။
“ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ…”
“ ငါကတော့ လုံးဝမတင်ဘူး…”
“ ငါလဲ အကျခံလိုက်တော့မယ်….မတင်ဘူး….”
“ ဒါဆို တစ်ယောက်မှ ဂျူရီ မ၀င်နဲ့ ….သဘောတူလား….”
“ ယောက္ခမက အဆောင်ကို လိုက်လာမှာပေါ့….”
“ ဟဲ့….ဆရာမက အပျိုကြီးဟာကို…..”
“ အေးလေ….အပျိုကြီးမို့ လို့ ပြောရဲတာပေါ့….”
“ ဒါပေမယ့် ဆရာမ မွေးထားတဲ့ ခွေးကြီး ငညို ရှိတယ်လေ….ဟာ..ဟ ”
“ ဟဲ့….အရေးကြီးပါတယ်ဆိုမှ…..။ ဆရာမ အဆောင်ကို လိုက်လာလို့ငါတို့ ကိုတွေ့ ရင် ပွဲကြမ်းမှာ…..အဲတော့ ငါတို့ တောခိုမယ်…..”
“ အော်….အနောက်ဘက်က သရက်တောထဲမှာ သွားပုန်းမယ်လို့ပြောမလို့ ပါ….”
“ အဆောင်မှာ ၂ ယောက်လောက်တော့ နေခဲ့….အခြေအနေ ကောင်းပြီဆိုရင် သရက်တောထဲကို လာအကြောင်းကြား…..ကျန်တဲ့သူတွေက ထမင်းချိုင့်နဲ့မနက် ၈ နာရီကတည်းက သရက်တောကို သွားကြမယ်……အပြန်ကျမှ ဆရာ့အိမ်မှာ သွားတောင်းပန်မယ်……ဆရာက ဆရာမလောက် ဒေါသမကြီးတော့ ပြသနာမရှိဘူး….ဆရာမကိုတော့ ၃ ရက်လောက်နေမှ တောင်းပန်မယ်….”
“ OK….good ”
လေးမ နဲ့မိ ကအဆောင်မှာနေခဲ့တယ်…..။ ကျန်တဲ့သူတွေက သရက်တောထဲမှာ….။
ဂျူရီနေ့ မှာ …..
“ လေးမတို့ ….နင်တို့ဆရာမ အဆောင်အောက်ရောက်နေပြီ…..”
“ အမယ်လေး….မှန်းထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား…..လုပ်ကြပါဦး….ငါတို့ ကို အပြင်ကသော့ခတ်သွား…..မဖြစ်သေးဘူးဟ….ဆရာမကလဲ ငါတို့ လိုပဲ ဟိုဘက်ဝရန်တာကနေ ကျော်ပြီးဝင်လာရင် ကွိကနဲမိမှာ…..ပဲပဲတို့အခန်းထဲမှာ ပုန်းနေမယ်….”
ပဲပဲက လေးမ နဲ့ မိကို အခန်းထဲထည့်ပြီး အပြင်ကသော့ခတ်သွားတယ်…..။
ဆရာမကတော့ သော့ခတ်ထားတဲ့ အာခီိခန်းတွေကို တခန်းချင်းလိုက်ကြည့်ပြီး ဒေါကန်ကန်နဲ့ပြန်သွားတယ်….။ ညနေ ဆရာ့အိမ်မှာ သွားတောင်းပန်တယ်….။ လေးမ တို့ကအဲလိုပဲ…..။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးရင် ထိုင်ကန်တော့နေကျ….။ ။
ဒါတွေကတော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိသုကာ ကျောင်းသူဘ၀ရဲ့ Scene လေးတွေပါ….။ နောက်ရက်တွေမှာ စိတ်ပါရင် အတိတ်က ရက်စွဲလေးတွေကို ထပ်ပြီးချိတ်ဆက်ပါဦးမည်…။
ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာ ( ၉ ) ။ ။ အမှတ်တရတွေပါ
နောက်ဆုံးနှစ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ရေးပေးထားတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို တင်လိုက်တာပါ….။ ဘာရယ်မဟုတ် အမှတ်တရ ရေးခိုင်းခဲ့တာလေးတွေက အခုတော့ လွမ်းစရာလေး…။ “ရေးပေးပါ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာလဲ ဘရုတ်သုတ်ခ စာလေးတွေရှိသေးတယ်…..။
ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာ(၁၀)။ ။ ရေးပေးခဲ့ကြသည်
မထူးပါဘူး…တင်လက်စနဲ့“ရေးပေးပါ” စာအုပ်ထဲက အမှတ်တရတချို့ဆက်တင်လိုက်ပါတယ်….။ တဆောင်လုံးကို မရေးခိုင်းခဲ့မိတာ နောင်တရတယ်…..။ စာရွက်တွေ အများကြီးကျန်နေသေးတယ်….
တွေ့ ရင် ထပ်ရေးခိုင်းဦးမယ်…..။ လေးမ blog ကိုလာလည်တဲ့သူတွေရော ရေးသွားဦးမလား…. သူတို့ တွေ ရေးထားသလိုမျိုးလေ….။
ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာ (၁၁) ။ ။ မန်းမှတ်တမ်း …
(ဘေးမှာ တမာပင်တွေရှိတယ်… ခွန်အားအပြည့်ပေးတဲ့ တောင်ကြီးကို လှမ်းမြင်နေရတယ်…အိမ်ကိုလွမ်းရင် တောင်တွေကိုကြည့်ပြီး အားယူရတယ်…တချို့ ကတော့ … “တောင်” ကြည့်ပြီး ငိုသတဲ့)
ဒီ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ … “လေးမ” ခြေရာတွေ … ထင်ကျန်ရစ်ပါတယ်…( အခုတော့ ပျက်ကုန်ရောပေါ့ )…..။
ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ … စက်ဘီးကလေးနဲ့“လေးမ”…. လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ မြွေတွေကို ..ခဏခဏ ရပ်စောင့် ခဲ့ရတယ်…..။
ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ… “လေးမ” …ကျောက်စိမ်းရောင် စူပါကပ်လေး …ဟိုယိုင်ဒီယိုင် ဖြစ်အောင် စီးခဲ့တယ် …။
ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ … dream ဆိုင်ကယ်ထက်…. “မိ” ခါးကို တင်းတင်းဖက်ပြီး ….. ကျောင်းတက် ခဲ့တယ်….။ ဆိုင်ကယ် အိပ်ဇော လောင်ထားတဲ့ အမာရွတ်ကလဲ … ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲ ရခဲ့တာ…..။
ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ … နှင်းတွေဝေတဲ့ မလင်းတလင်း … ဆောင်းမနက်ခင်းတစ်ခုမှာ … “လေးမ”….. မှောက်ရက် လဲ ခဲ့တယ် …..။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို ဆွဲထူမယ့်သူ … မရှိခဲ့ပါဘူး….။ အိပ်ပုတ်မ “မိ” ကလဲ အိပ်နေတုန်းပါ….။ “လေးမ” မငိုခဲ့ပါဘူး …. ဒူးမှာ သွေးစက်လက်နဲ့ … မုန့် တီသုတ် ၂ ပွဲစားခဲ့ပါတယ်…..။ ( အကြောင်းရင်း …. မုန့် တီသုတ်မှာ အလွန်စားကောင်းသောကြောင့် ….. သူများတွေထက်ဦးအောင် ပန်းကန် အသစ်ဖြင့်စားချင်သောကြောင့်…. အပြေးအလွှား ပြေးထွက်လာရာမှ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဟတ်ထိုးလဲကျ ဒူးပြဲရခြင်းဖြစ်၏…..)
ဒီလမ်းမကြီးဘေးက … တမာပင်တွေ ကြားထဲမှာ…..အတွဲတွေ….(သူများတွေ) ….. လမ်းလျှောက် နေတာကို ပြောင်ခဲ့ ဖူးတယ်…… ( တမာတောမှာ ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ မောင်ရယ်…မောင်ရယ်…လို့ ….) ။
ဒီလမ်းပေါ်ကနေ … ညာဘက်ကိုကွေ့ ပြီး ရှေ့နဲနဲဆက်သွားလိုက်ရင် “လေးမ” တို့ ရဲ့ … ပညာရေနို့သောက်စို့ ရာ … ဗိသုကာဌာနလေးကို ရောက်ပါမယ်… ။ ဗိသုကာဌာနက သီးသန့်ဌာနလေး …။ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ….. အေးအေးဆေးဆေး……. သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်း လို့ရတယ် ……။
ဒီဇိုင်းစတီရီယို room လို့ ခေါ်တဲ့ … အခန်းထဲမှာ … ပုံတွေဆွဲခဲ့ကြတယ် … ။ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်က သီချင်းတစ်ပုဒ် စအော်လိုက်ရင် … ကျန်တဲ့သူတွေက နောက်ကဆက်အော်ပြီး … ပုံတွေဆွဲ ကြတယ်……။ ပုံဆွဲရင်းခေါင်းရှုပ်လာရင် … အလယ်က courtyard ထဲက … မြက်ခင်းဘေးမှာ သွားထိုင်ပြီး … အကြံထုတ်လို့ ရတယ် … “မိ” နဲ့ ရန်ဖြစ်ရင်လဲ ထွက်ထိုင်ပြီး စိတ်ကောက်လို့ ရတယ် … ။
ဒီအဆောင်ကြီးက main building လို့ ခေါ်တဲ့ အဆောက်အဦကြီး….။ ဒီအဆောက်အဦကြီးရဲ့ အောက်ထပ်မှာ ဆရာကန်တော့ပွဲ….. မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲတွေ … လုပ်ခဲ့တယ်…. ။
ဒီ building ရဲ့အပေါ်ထပ်က … စာသင်ခန်းတွေမှာ မြို့ ပြဌာနကသင်တဲ့ အတန်းတွေမှာ အိပ်ငိုက်ခဲ့ဖူးတယ်…။ ဆရာစာရေးနေတဲ့ … အချိန်မှာ လိုက်မကူးနိုင်ဘဲ … လုံချည်မှာကပ်နေတဲ့ Paper tape တွေကို အသာအယာ ခွာနေတဲ့ ( ပုံဆွဲနေရာကနေ ထလာတာကိုး) အာခီကျောင်းသူကို … ကောင်လေးတွေက “မြင်မြင်သမျှ စိတ်ပျက်အောင် လှပါတဲ့… အိုဗျ… မအာခီ…” လို့ များ…ကွယ်ရာမှာ ပြောလေမလား …။ တကယ်ပြောတာပါ … မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ … အိပ်ရေးပျက်လွန်းတဲ့ “အာခီပျက်” ပါ….။
ဒီ အပေါ်ထပ်က …. ပါချုပ်ရုံးခန်း ကိုလဲ… ခဏခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်… (ဒီလိုပဲ…ပါပါကြီးနဲ့စကားစမြည် ပြောရတာပေါ့)… ။ အဲဒီအပေါ်ထပ် စာသင်ခန်းရှေ့မှာ “လေးမ” နဲ့ “မိ” …. ကောင်လေးတစ်အုပ်နဲ့ … ရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်…. အကြောင်းရင်းက “လေးမ” … ခလုတ်တိုက်တာကို လှောင်လို့ …. “မင်းကဘာကောင်မို့ လို့ငါ့ကိုလှောင်ရတာလဲ …. မင်းငါ့ကို ဘာမှတ်နေလဲ… ပါချုပ်နဲ့ တိုင်မယ် ” ဆိုပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး … သွားချဲခဲ့တာ….။ တိုင်ရတာလွယ်လွန်းလို့… ခြိမ်းခြောက်မိတာပါ….။ “မိ” တောင် ဘောလုံးပွဲမှာ “သေစေနိုင်လောက်တဲ့ အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ခြင်း …” ဆိုတဲ့ ပြစ်မှုနဲ့အတိုင်ခံရသေးတယ် … အဲဒီလောက်…ဆတ်ဆတ်ထိမခံ အတိုင်အတောထူတဲ့ … MTU ကျောင်းသားတွေပါ ….။
ဒီအဆောက်အဦမှာပဲ … ၀တ်ရုံဖားဖားကြီးတွေ ၀တ်ပြီး … ဒီကျောင်း…ဒီလမ်း…ဒီအဆောင်…ဒီသူငယ်ချင်း တွေကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်….။ ( မျက်ရည်တွေပါတွေဝဲလို့ …. မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းပါပဲ ………………လို့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး…) ။ ။